Jananinepal.comसमय छउञ्जेल मस्तले निदाउन पल्केको सरकारको रवैयाले आज सिङ्गो देश र जनता यति ठुलो माहामारिमा धकेलिएको छ - Jananinepal.com
समय छउञ्जेल मस्तले निदाउन पल्केको सरकारको रवैयाले आज सिङ्गो देश र जनता यति ठुलो माहामारिमा धकेलिएको छ
प्रकाशित मिति: ३ जेष्ठ २०७७, शनिबार
डिसेम्बरको अन्त्यतिर चिनको बुहान शहरबाट देखापरेको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ यतिखेर विश्वभरि फैलिइसकेको छ । जतिखेर चीन कोरोनासित जुधिरहेको थियो, त्यति बेला बाँकी विश्वले यसलाई ‘चाइनिज भाइरस’ नाम दिएर हाँसोमा उडाइरहेको थियो । चीन र चिनियाँ जनताको पीडामा मलम लगाउन सघाउनुको साटो नेपालका नेताहरु भने कोरोना जहाज चढेर आउँदैन, हामी सुरक्षित छौँ भनेर ढुक्क भई बसे । चीनलाई दुःख पर्दै गर्दा हामी चीनका अत्यन्त निकट छिमेकी भएको नाताले हामीसित जे क्षमता छ, जे जस्ता साधन–स्रोत छन्, तिनैमार्फत भए पनि हामीले उसलाई सहयोग गर्नुपर्थ्यो । यस विषयमा पंक्तिकारले विभिन्न फोरममार्फत आवाज उठाएको पनि थियो । छिमेकीलाई विपत्ति पर्दा हामीले सघाउनैपथ्र्यो । तर, यसमा हामी चुक्यौँ । जसले गर्दा आज आफू संकटमा पर्दा चीनसित सहयोग माग्नसमेत संकोच मान्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रो देश छ ।
चीन कोरोनासित जुधिरहँदा बाँकी विश्वले झैँ उसलाई नगिज्याए पनि हाम्रो राज्यले सोच्यो– कोरोना हिमाल नाघेर आउन सक्दैन, हामीलाई यसको कुनै प्रभाव पर्दैन । त्यसैले हामी समयमै यसबारे सतर्क भएनौँ । न हामीले कुनै पूर्वतयारी नै गर्‍यौँ, न कोरोना भित्रिहालेको अवस्थामा त्यससित जुध्न या त्यसको रोकथामका लागि कुनै कार्ययोजना नै तयार गर्न सक्यौँ । आवश्यक भौतिक सामग्रीको अवस्था कस्तो छ, के कति आवश्यक पर्छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी जुटाउने, कसरी देशभरि वितरण गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल कसरी उच्च बनाउने लगायत विषयमा हामी मौन बस्यौँ । परिणाम अहिले हामी सबैसामु प्रस्ट छ ।
आज विश्वका शक्तिशाली र विकसित देशहरू, जहाँ प्रविधिको उच्चतम विकास भएको छ, स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय र भरपर्दो छ, उनीहरू पनि कोरोनाको प्रकोपसामु निरीह देखिएका छन् । अमेरिका, स्पेन, इटली, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स ब्राजिल भारत जस्ता देश आज कोरोनाकै कारण अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका छन् । पर्याप्त साधन–स्रोत, सम्पत्ति र दक्ष जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि उनीहरू सबैलाई कोरोनासित जुध्न धौधौ भइसकेको छ । छिमेकी भारतमै पनि अत्यन्त ठूलो जनसंख्या र विभिन्न धार्मिक कट्टरताका कारण सरकारको लकडाउनको आदेश उल्लंघन गरिँदा आज ऊ पनि बिस्तारै संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । भारतको संकटको प्रभाव सबैभन्दा पहिले हामीलाई नै परेको छ । त्यसको समयमै आकलन गर्न नसक्दा र समयमै उचित निर्णय लिएर काम गर्न नसक्दा आज कोरोनाको भयावह अवस्था झेल्नुपर्ने गम्भीर मोडमा हामी नेपाली पुगेका छौँ ।
विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन भन्ने गरिन्छ । तर, नेपालका हकमा कोरोनाको विपत्ति निकै लामो पूर्व तयारि र समय दिएर बाजा बजाएरै आएको हो । तर, हाम्रो देशको नेतृत्वले समयमै आवश्यक निर्णय गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान ढिलाइ र हेलचेक्य्राई गरेको हुनाले सिंगो देश नै अप्ठ्यारोमा धकेलिसकेको छ । कोरोनाको सम्भावित प्रकोपको पूर्वानुमान गरी त्यसका लागि देशभरि आवश्यक पर्ने क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन वार्ड, आइसियु, आवश्यक उपकरण, औषधि, पिपिई, स्वास्थ्यकर्मी लगायत सबै पक्षको भरपर्दो तयारी गर्न पर्थ्यो तर, सरकार, कागजी निर्णय र हल्लामा मात्र रमाइरह्यो । झन् विधेयक ल्याउने र फिर्ता गर्ने पार्टि बनाउने र फुटाउने सांसद अपहरण गर्ने जस्तो घिनलाग्दो काममा सरकार लागिरह्यो जसले गर्दा आज साँच्चै संकट पर्दा अत्यावश्यक तयारी केही पनि भएको रहेनछ भन्ने प्रस्ट देखिएको छ ।
विदेशबाट फर्किएका या फर्किन चाहने नागरिकलाई क्वारेन्टाइन बनाएर राख्न नसक्ने सरकारले तिनको पसिनाको कमाइलाई रेमिट्यान्समा गणना गरेर देश चलाइरहन कसरी सुहाउँछ ? कोरोनाले हामीलाई तयारीका लागि दिएको सरकारले चाहेको भए समयमा नै अस्थायी क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन वार्डसहितका अस्पताल बनाउन सक्थ्यों । अस्पतालहरूमा आइसियु थप्न सक्थ्यों। आइसियुमा उपकरणको व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यों। सम्भावित संक्रमितको परीक्षणका लागि परीक्षण किट र स्वास्थ्यकर्मीका लागि पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट पनि पर्याप्त झिकाउन सक्थ्यौँ । आखिर सरकार सित पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि राज्यको ढुकुटीमा खर्च नभएर थुप्रिएको पर्याप्त विकास बजेट बाँकी हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई रकमान्तर गरेर खर्च गर्नबाट राज्य संयन्त्र नराम्ररि चुक्यो ? सरकारले हुन्छ, गर्दै छौँ, गरेका छौँ भन्नेजस्ता ओठे जवाफ दिइरह्यो । तर यथार्थ भने अहिले सबै सामु छर्लंग भएको छ ।
जब समय घर्किसकेको थियो, त्यतिखेर सरकार र उसका सरोकारवाला निकाय केही तातेजस्ता देखिए । उनीहरूले स्वास्थ्य उपकरण झिकाउन सुरु गरिसकेको लामो प्रक्रिया अन्तिम समयमा रद्द गरेर छोटो बाटोबाट उपकरण खरिद गर्ने चोरबाटो अपनाउँदा मोटो रकम भ्रष्टाचार भएको आरोप सरकारका मन्त्रीहरूमाथि नै लागेको छ । अन्तिम समयमा आएर उसले खरिद प्रक्रिया रद्द त गरेको छ । तर, यसबाट देशभर स्वास्थ्यसम्बन्धी अत्यावश्यक उपकरणको गम्भीर अभाव देखिएको छ । चिकित्सकहरूले आवश्यक उपकरण विनै सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ ।
नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल र जनता सबै एकजुट भई कोरोनाविरुद्धको संकटसित जुध्नुपर्ने समयमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताले सरकारको विरोध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । समय छउन्जेल मस्तले निदाउने र समय घर्किसकेपछि हतारिने सरकारको रबैयाले गर्दा प्रशस्त कमी–कमजोरी भए, गरिए । परिणामतः आज सिंगो राष्ट्र र जनता संकटमा धकेलिएका छन् । संकटको मौका छोपेर कुस्त कमाउने दाउ छोप्दा यतिखेर देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था भयावह बन्दै गएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
विश्व संकटको यो महामारीमा विश्वले देशबाहिर रहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काइरहेको छ । आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्किन हरेक देशले आह्वान गरिरहेका छन् । विभिन्न देशले नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई विमान चार्टर्ड गरेर लगिरहेका छन् । तर, हामी भने आफ्ना नागरिकको रेमिट्यान्सको हरहिसाब राख्ने, त्यसैको आडमा देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, तर बिदेसिएका तिनै नेपालीलाई संकटको समयमा देश फर्किन भने नदिने रबैया देखाइरहेका छौँ
विदेशबाट फर्किएका या फर्किन चाहने नागरिकलाई क्वारेन्टाइन बनाएर राख्न नसक्ने सरकारले तिनको पसिनाको कमाइलाई रेमिट्यान्समा गणना गरेर देश चलाइरहन कसरी सुहाउँछ ? छिमेकी देशको सिमानाबाट फर्किने या अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै फर्किने नागरिकको अभिलेखसम्म राख्न नसक्ने सरकारले ठूला गफ दिँदैमा कसरी पत्याउने । त्यसैले यो सरकार गरिखाने वर्गको सरकार हैन केही सिमित गराईखाने वर्गको सरकार हो । त्यसैले आफु र आफ्नो परिवारको सुरक्षा आफै गरौ अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य काममा घर बाहिर ननिस्कौ ।
#मनपरे शेयर गर्नुहोस्